MIUI dia hanana doka vitsy sy karazana isan-karazany | Androidsis
Araka ny efa fantatsika, MIUI dia manana doka amin'ny interface-ny, na izany aza zavatra izay niteraka olana toy ny volana vitsivitsy lasa izay. Amin'ny tranga sasany, azo atao izany alefaso ireo doka ireo an-telefaonina. Na eo aza izany dia tsy nihena ny fitarainana momba ny fisian'ireo doka ireo rehefa mandeha ny fotoana. Noho izany, avy amin'ny Xiaomi dia handray fepetra amin'ity tranga ity izy ireo.
Ny talen'ny vokatra MIUI dia niandraikitra ny fanamafisana fa ny lamina fanamboarana ireo finday marika sinoa hampihena ny isan'ireo doka nataonao. Fanapahan-kevitra raisin'olona maro, satria ireo doka ireo dia tsy zavatra tian'ny mpampiasa loatra.
Ny tetikasan'i Xiaomi dia mandeha amin'ny alàlan'ny fananana doka vitsy kokoa amin'ny MIUI. Indrindra ireo doka manimba ny zavatra niainan'ny mpampiasa esorina amin'ny sosona fanaingoana izy ireo. Ho fanampin'ny fanomezana ny fahafaha-manao eo amin'ny sehatry ny telefaona hamonoana doka tanteraka. Safidy iray hafa izay nandrasan'ny mpampiasa nandritra ny fotoana ela.
Manantena ny orinasa fa vonona ireo fepetra ireo ao anatin'ny telo volana. Io no nolazain'izy ireo, ka fohy ny fiandrasana amin'ity lafiny ity. Azontsika atao koa ny manana interface miaraka amin'ny doka vitsy kokoa ary ny traikefa be mpampiasa kokoa. Ho hafa koa ny karazana doka.
Ao amin'ny MIUI dia mahazatra ny fanaovana doka izay tsy mahaliana ny mpampiasa, na lasa tsy mendrika mihitsy aza. Hanangana fiovana amin'ity orinasa ity ny orinasa, hisorohana ireo mpampiasa tsy mahazo aina. Amin'ny ampahany, voamarina fa handray ny tantaran'ny fitetezana anao izy ireo mba hampisehoana ireo doka ireo.
Ka manantena izahay fa hanana vaovao misimisy momba ireo fiovana MIUI tao anatin'ny volana vitsivitsy. Tsy misy isalasalana, ny fihenan'ny doka dia vaovao mahafinaritra izay nandrasan'ny mpampiasa maro amin'ny telefaona Xiaomi. Manantena izahay fa afaka mampahafantatra anao momba ireo fepetra vaovao ireo atsy ho atsy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » MIUI dia hanana doka vitsy araka ny nolazain'i Xiaomi
Ny Galaxy Note 10 dia hampiditra adaptatera USB-C hampifandray ny headphones amin'ny jack